Nadaafad darro lagu sheegey lacagaha waraaqaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nadaafad darro lagu sheegey lacagaha waraaqaha
Waxaa wanaagsan in mararka qaarkood gacmaha la dhaqdo
La daabacay tisdag 9 april 2013 kl 16.25
Lacagaha waraaqaha ee Iswiidhen ayaa la sheegey iney yihiin kuwa ugu wasakhda iyo jeermiska badan ee dhammaan Yurub, sida ku cad war-bixin laga soo saarey jaamicadda Oxford, halkaasina lagu sameeyey baaritaan wasakhda iyo jeermisyada lacagaha waraaqaha kala duwan ee waddammo kala duwan.
George wuxuu ka howl-galaa makhaayad, isagoona ay maalintii soo maraan lacago fara badan ee kuwa waraaqaha ah:
- Xaqiiqdii waxay lacagaha waraaquhu isu maraan gacmo aad u kala duwan, waana midda keenta iney ka dhashaan jeermisyo fara badan. Waa in marka laga taxadarro, gacmaha la dhaqdo kolka ey gacantaada soo maraan lacago waraaqo ah. Sidoo kale waa inaad ka taxadarto inaadan indhaha ama meelo xasaasi ah aadan faraha marin. Annigu sideydaba waxaan isticmaalaa gacma-gashi kolka aan khaanadda taaganahay oo aan lacagaha qabanayo, tusaale ahaan.
Isku celcelin ayaa lacagaha waraaqaha ee yurub laga helaa warqaddiiba 26 000 oo bakteeriyo ah. Hase yeeshee kolkii ey culimada jaamicadda Oxford baaritaan ku sameeyeen waraaqaha lacagta ee dalkan Iswiidhen ey ka heleen bakteeriyo gaarsiisan 39 600. Iyadoona gashay kaalinta labaad ee tirada bakteeriyada, halka ay kaalinta koowaad ka qaaday lacagaha waraaqaha ee dalka Danmark oo laga heley 40 226 oo jeermis ah. Hase yeeshee caalinka ku takhasusay culuunta ka hor-tagga cudurrda faafa ee jaamicadda Uppsala Björn Olsen uu sheegay in lacagaha waraaqaha Iswiidhen aaney caafimaaka uga waxyeelo badneyn kuwa waddammada kale:
- Waxaa jira ilo kale ee fara badan ee leh jeermisyo ka halis badan kuwa lacagaha waraaqaha ah. Marka iilama muuqato in loo baahan yahay in middaa la buunbuuniyo, iyo iney waraaqaha lacaguhu halis ey noolaha u yihiin. Halka dhanka kale loo baahan yahay iney ka taxadaraan dadyoowga ku hoowlan goobaha lacagaha badani soo maraan, sida goobaha ganacsiga iyo wixii la mid ah. Iyo sidoo kale in laga fekero nadaafadda gacmaha oo mararka qaarkood la dhaqdo gacmaha. Waa hab lagu yareeyn karo tirada jeermisyada gacmaha.